निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिने गरी संविधान संशोधन गर्न अख्तियारको आग्रह - Naya Patrika
निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिने गरी संविधान संशोधन गर्न अख्तियारको आग्रह
कृष्ण कट्टेल, कृष्ण रिजाल, काठमाडौं | साउन १८, २०७४
त्रसित नबनाउन निजी क्षेत्रको माग –
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गरिदिन संसदीय समितिसँग सहयोग मागेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि मात्रै छानविन गर्न पाउने क्षेत्राधिकारले साँघुरिनुपरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेतर्फ सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मात्र गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ । संविधान संशोधन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने निजी क्षेत्रमा पनि जान चाहन्छौँ ।’ विगत ४ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्रमा भएको पाइएको उनले बताए । शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बस्न्यातले बताए । त्यसमध्ये पनि सरकारी आय, काममा लापरवाही र हिनामिना भएको भन्दै बढी उजुरी आएको उनले जानकारी दिए ।
उजुरीकर्ता अथवा साक्षीको बचाउका लागि छुट्टै ऐन नभएकाले कतिपयले उजुरी हाल्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘उजुरीकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि हामीले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रविधिको विकाससँगै पहिलाजस्तो मानिसलाई बयान गरेर त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउने मात्र नभई प्रविधिको प्रयोगबाट छानविनको प्रक्रियालाई अझ आधुनिक बनाउँदै छौँ । अनलाइनबाट उजुरी लिने काम सुरु गर्न लागेका छौँ ।’
आयोगको छब्बीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि समितिले प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले प्राप्त गरेका तथा फछ्र्यौट भएका उजुरीलगायतबारे अख्तियार प्रमुखले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । सोही क्रममा बस्न्यातले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा अख्तियारको शाखा कार्यालय खोल्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताए ।
हामीलाई त्रसित नबनाइयोस् : निजी क्षेत्र
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा र परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भएको तर्क गर्दै अख्तियार आवश्यक नपर्ने बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी : समिति सदस्य
समिति सदस्यहरूले सरकारी र निजी क्षेत्र जहाँ भए पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी भएको बताएका छन् । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद झलनाथ खनालले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्र शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, भूमि, गृह र वनजस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा मुलुकको विकास रोकिएको बताएका छन् । खनालले विकासका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारप्रति सचेत रहनुपर्ने तर्कसमेत गरे । सांसदहरू जनकराज जोशी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, कृपाशुर शेर्पा, हर्कबोल राई, अमनलाल मोदीलगायतले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेतर्फ आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभई आयोगले राजनीतिक दल, नेताहरूतर्फ पनि छानविन बढाउनुपर्ने सुझाब दिए । अख्तियारले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका उनीहरूले आगामी दिनमा निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाब दिँदै जानेसमेत बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मात्र गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ । संविधान संशोधन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने निजी क्षेत्रमा पनि जान चाहन्छौँ ।
– दीप बस्न्यात
प्रमुख आयुक्त, अख्तियार
लगानीको वातावरण नबिगारौँ
जनतालाई रोजगारी र सरकारलाई राजस्व दिइरहेका निजी क्षेत्रलाई किन अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्यो ? यस्तो प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउँछ । निजी क्षेत्रले गलत र गैरकानुनी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । यसर्थ, हामी सरकारबाट नियमन कम र सहजीकरण बढी चाहन्छौँ । अनुसन्धान तथा नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भएकाले अनुसन्धान गर्ने अधिकार अर्को संस्थालाई पनि दिनु उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर लगानीको वातावरण बिगार्नु हो ।
सार्वजनिक बहस गराऔँ
निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकाय अहिले पनि थुप्रै छन् । हामी नियामक निकायको संख्या घटाऔँ भनिरहेका छौँ तर, झन् थपिने कुरा कतिको जायज हुन्छ ? अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धान गर्न किन चाहन्छ ? आवश्यक छ कि छैन ? यसले लगानी र उत्पादन बढाउँछ कि उद्यमशीलता मार्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सरकार र सांसदले खोज्न आवश्यक छ । यो अति संवेदनशील विषय भएकाले सार्वजनिक बहस गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुन्छ ।